IELTS सुन्ने सेक्शनमा उच्च स्कोर गर्ने आवश्यक सल्लाहहरू - साम्प्रदायिक समाचार: अनलाइन व्यापार, थोक र B2B बजार समाचार
IELTS सुन्ने सेक्शनमा उच्च स्कोर गर्न आवश्यक सुझावहरू
फेब्रुअरी 17, 2021 फेब्रुअरी 17, 2021 लुई रोलेन एशिया, एशिया फ्रीलान्सिंग ग्लोबल गिग, एशिया थोक र B2B, ब्लग, पाकिस्तान, पाकिस्तान फ्रीलान्सिंग ग्लोबल गिग, पाकिस्तान थोक र B2B
तपाईंको सुन्ने सुधार गर्न, समाचार, भिडियोहरू, गीतहरू, र चलचित्रहरू हेर्न र सुन्न जारी राख्नुहोस्; यसले स्वचालित रूपमा तपाइँको सुन्ने क्षमतालाई सुधार गर्दछ।
मल्टिटास्किंग एउटा उत्तम सल्लाह हो जुन तपाईको IELTS सुन्ने सेक्शनमा प्रयास गर्नका लागि सम्झन।
परीक्षकले तपाईंलाई प्रश्नहरूको साथ छल गर्न प्रयास गर्न सक्छ, र तपाईं गलत उत्तर लेख्न सक्नुहुनेछ।
धेरैजसो क्यानाडा, अमेरिका, युके र न्यूजील्याण्ड आदिमा अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालयमा भर्नाका लागि, पाकिस्तानका विद्यार्थीहरूले IELTS परीक्षामा भाग लिनु पर्छ र उनीहरूले भर्ना गर्न चाहेको विश्वविद्यालयमा आफ्नो ब्यान्ड स्कोर पेश गर्नु पर्छ। तपाईंको शैक्षिक क्यारियर कति राम्रो छ, आईईएलटीएस नतिजा नभएमा माथि उल्लेखित कुनै पनि देशहरूमा प्रवेश पाउने सम्भावना कम हुन सक्छ जब सम्म विश्वविद्यालयले IELTS छुट नदिन्छ।
यदि उत्तर सहि छ, तर हिज्जे गलत छन् भने, तपाईंको उत्तर गलतलाई गणना गरिनेछ।
IELTS धेरै अभ्यास नगर्ने विद्यार्थीहरूको लागि सबैभन्दा कठिन परीक्षा मध्ये एक हो। यो विद्यार्थीको परीक्षामा उपस्थित हुनु अघि राम्रो तयारी गर्ने क्रममा सब भन्दा सजिलो परीक्षा हुन्छ। अभ्यासको लागि कम तयारी समय भएका विद्यार्थीहरूले उच्च अंकको लागि केही पोइन्टहरू र सुझावहरू राख्नु पर्छ। IELTS परीक्षामा चार खण्डहरू पढ्ने, सुन्ने, बोल्ने र लेख्ने समावेश हुन्छ।
यस लेखले IELTS सुनुवाई खण्डमा समर्थक जस्तो खेल्ने रणनीतिहरूको बारेमा छलफल गर्नेछ र यसलाई सुल्झाउने सुझावहरू सिक्नेछ।
शीर्ष 8 महत्त्वपूर्ण सुझावहरू IELTS सुन्नमा plus प्लस ब्यान्डहरू प्राप्त गर्नका लागि
IELTS सुन्न सेक्सनमा कुल of० प्रश्नहरूको साथ तीन भाग हुन्छन्। प्रत्येक उप-सेक्सन र प्रश्न प्रकृति र जटिलता स्तर मा फरक हुन्छ। IELTS पठनको तेस्रो र अन्तिम खण्ड जटिल मध्ये एक हो, र पहिलो खण्ड उच्च स्कोर गर्न सजिलो एक हो।
निम्न आवश्यक सुझावहरू छन् जुन तपाईंले आठ वा बढीको ब्यान्ड स्कोर स्कोर गर्न अभ्यास गर्नुपर्दछ।
१. अधिक सुन्नुहोस्
IELTS सुन्ने भाग पूरा गर्न आवश्यक एक आवश्यक कौशल भनेको सुन्ने कला हो। यो उत्तम हो यदि तपाई स्पिकरले के भनिरहेछ भनेर बुझ्नुहुन्छ भने; बुझै नसकिने गरी, तपाइँ प्रश्नहरूको प्रयास गर्न असफल हुनुहुनेछ। तपाईंको सुन्ने सुधार गर्न, समाचार, भिडियोहरू, गीतहरू, र चलचित्रहरू हेर्न र सुन्न जारी राख्नुहोस्; यसले स्वचालित रूपमा तपाइँको सुन्ने क्षमतालाई सुधार गर्दछ।
२. तपाईंको हिज्जेमा काम गर्नुहोस्
सहि उत्तरहरूको अनुमान गरेता पनि, केहि विद्यार्थीहरू अझै उच्च स्कोर गर्न असफल हुन्छन् किनकि उनीहरू आफ्ना उत्तरहरू गलत हिज्जेसँग लेख्छन्। IELTS सुन्न अनुभाग केस संवेदनशील छ, र विद्यार्थीले राम्रो स्कोर गर्न सही हिज्जेको साथमा ठूला अक्षर र सानो अक्षरको उपयोग गर्नु पर्छ। यदि उत्तर सहि छ, तर हिज्जे गलत छन् भने, तपाईंको उत्तर गलतलाई गणना गरिनेछ। IELTS तयारीको सम्बन्धमा तपाईको दिमागमा गडबडी हटाउन शीर्षबाट सल्लाह लिनुहोस् पाकिस्तानमा शिक्षा परामर्शदाता IELTS सुन्ने सेक्सन र यसको अभ्यासको सम्बन्धमा तपाईंको अस्पष्टता स्पष्ट गर्न।
Your. तपाईको शब्दावली ठूलो बनाउनुहोस्
यो सँधै आवश्यक छैन कि स्पिकरले बोल्ने शव्दहरू खाली वा उत्तर भागमा उपयुक्त हुन्छन्। वक्ताले सहि उत्तरको समानार्थी शब्द प्रयोग गर्न सक्दछ, र तपाईंलाई यी चालहरू थाहा हुनुपर्दछ। यस अवस्थासँग डिल गर्न तपाईसँग शब्दावलीमा राम्रो पकड हुनुपर्दछ र तपाईको भाषाको परीक्षा हलमा प्रवेश गर्नु अघि राम्रोसँग विकास गर्नुपर्दछ।
तपाईको उत्तरहरू अन्तमा पुन: जाँच गर्नुहोस्, निश्चित गर्नुहोस् कि तपाई सही समाधान टाइप गर्नुभयो र ठीक प्रश्नको अगाडि किनकि उत्तरहरूको गलत क्रमले तपाईलाई कुनै अंक दिदैन।
Mult. मल्टिटास्क गर्न सिक्नुहोस्
मल्टिटास्किंग एउटा उत्तम सल्लाह हो जुन तपाईको IELTS सुन्ने सेक्शनमा प्रयास गर्नका लागि सम्झन। दिईएको समयमा अडीन सुन्नु अघि प्रश्न राम्रोसँग पढ्नु राम्रो हुन्छ र ती प्रश्नहरूलाई तपाईको टाउकोमा राख्नु राम्रो हुन्छ। ध्यानपूर्वक अडियो सुन्नुहोस् र जाँच गर्नुहोस् कि अडियो भागसँग समस्याको उत्तर छ कि छैन। यदि यससँग यसको उत्तर छ भने, तुरुन्तै उत्तर लेख्नुहोस् o आफ्नो उत्तरहरू लेख्न पर्खनुहोस्; अन्त्यमा, तपाइँ कण्ठ गर्न पर्याप्त समय पाउनुहुने छैन।
Your. तपाइँका उत्तरहरू पुन: जाँच गर्नुहोस्
उत्तर पुस्तिकामा तपाईंको उत्तरहरू प्रतिलिपि गर्दा, तपाईं आफ्नो उत्तरहरू गलत सेक्सनमा लेख्न सक्नुहुन्छ वा उत्तरहरू मिलाउन सक्नुहुन्छ। तपाईको उत्तरहरू अन्तमा पुन: जाँच गर्नुहोस्, निश्चित गर्नुहोस् कि तपाई सही समाधान टाइप गर्नुभयो र ठीक प्रश्नको अगाडि किनकि उत्तरहरूको गलत क्रमले तपाईलाई कुनै अंक दिदैन।
Be. ध्यान दिनुहोस्
निश्चित गर्नुहोस् अडियो रेकर्ड सुन्नुहुँदा तपाईं रेकर्डिंगमा पूरा ध्यान दिईरहनुभएको छ। अन्य सामानमा ध्यान दिन वा परीक्षा हल गतिविधिहरू द्वारा अलमल्याउने तपाईं आफ्नो उत्तर ट्रयाक गुमाउन हुनेछ, र तपाईं दोस्रो अडियो रेकर्डिंग सुन्न मौका प्राप्त छैन। के गयो गयो; तपाईं यसलाई फिर्ता प्राप्त गर्नुहुने छैन।
Different. बिभिन्न र समझदारी साथ सोच्नुहोस्
याद गर्नुहोस्, IELTS परीक्षामा प्रत्येक प्रश्न विगतको भन्दा फरक छ। परीक्षकले तपाईंलाई प्रश्नहरूको साथ छल गर्न प्रयास गर्न सक्छ, र तपाईं गलत उत्तर लेख्न सक्नुहुनेछ। कहिलेकाँही उत्तरहरू पनि स्पष्ट हुन्छन्, र कहिलेकाँही ती लुकेका हुन्छन्; त्यहाँ केहि शब्दहरू छन् जुन तपाईंको उत्तरहरूसँग मेल खाँदछन्, तर तिनीहरू सही हुँदैनन्। एक पटक सफलतापूर्वक तपाईंको IELTS परीक्षा प्रयास गर्न यी तरिकाहरूको गहिराइ बुझ्नको लागि पाकिस्तानका शीर्ष शिक्षा सल्लाहकारहरूसँग परामर्श गर्नुहोस्।
As. जति सक्दो अभ्यास गर्नुहोस्
सबै IELTS सेक्सनहरूको लागि अभ्यास उच्च ब्यान्ड वा स्कोरहरूको लागि मात्र कुञ्जी हो। तपाईको भाग्यले काम गर्न सक्छ, तर सबैको लागि यो सधैं एक समान हुँदैन। IELTS परीक्षाले धेरै अभ्यासको माग गर्दछ, र महान प्रशिक्षण र चालको समझदारीको साथ व्यक्तिहरू मात्र उच्च स्कोर गर्न सक्छन्।
यो पनि पढ्नुहोस्: Band ब्यान्डको साथ आईईएलटीएस पास गर्नुहोस् - विद्यार्थी गाइड
अभ्यास र मार्गदर्शन IELTS परीक्षामा उच्च स्कोर गर्ने कुञ्जी हुन्
मानौं तपाईंसँग IELTS परीक्षाको लागि पर्याप्त समय छ। त्यो अवस्थामा, तपाईंले यथासम्भव अभ्यास गर्नै पर्छ किनभने तपाईं आफ्नो कमजोरीहरू राम्रोसँग बुझ्नुहुनेछ र परीक्षामा उपस्थित हुनु अघि ती कमजोर बुँदाहरूलाई हटाउन सफल हुनुहुनेछ। साथै, तपाईंलाई मार्गदर्शन गर्न र उच्च ब्यान्ड स्कोर गर्नका लागि तपाईंको ज्ञानमा थप्नका लागि यस क्षेत्रमा विशेषज्ञको परामर्श लिन नबिर्सनुहोस्।
सांप्रदायिक समाचार आईईएलटीएस परीक्षा IELTS सुन्न अनुभाग
म लुइस रोलेन एक ब्लगर र सामग्री लेखक हुँ, मैले ई-शिक्षा, शिक्षा, बाल शिक्षा, व्यवसाय, प्रविधि, घटना, स्वास्थ्य, र विकासमा ठूलो चासो विकास गरेको छु।
Ds अभिषेक - रचनात्मकता, नवीनता र उद्यमशीलता, सबै एकमा
कपडा (थोक र B2B बजार) कम लागत कपडा नेता
सफाई (थोक - B2B बजार) कम लागत सफाई नेता
ईकमर्स (थोक र B2B बजार) कम लागत ईकमर्स नेता
शीर्ष ब्रान्ड नामहरू (थोक र B2B बजार) कम लागत ब्रान्ड नाम नेता
थोक पोर्टल - कम लागत थोक पोर्टल नेता
छाला हेरचाह (थोक र B2B बजार) कम लागत छाला हेरचाह नेता